Isikhululo senqwelomoya saseBarajas eMadrid silungiselela ukufika okungxamisekileyo | Iindaba zeGajethi
[EHLELWE 19:09 PM] Gqibela inqwelomoya yafika ngokugqibeleleyo kwisikhululo seenqwelomoya kwaye ngoku oonobangela bokufika ngokungxamisekileyo kuya kufuneka kuphandwe. Isiphelo esinqwenelekayo kubo bonke, sivuyisana nabo bonke abasebenzi ngokuhamba kunye nokulungelelanisa nesikhululo seenqwelomoya uqobo kunye neenkonzo zongxamiseko.
Olu ayilo lusuku lubalaseleyo kwisikhululo senqwelomoya saseBarajas eMadrid. Imva kwemini, okanye mandithi kusasa, iqale ngengxaki ebangelwe kukubaleka kwedrones enye okanye ezingaphezulu kufutshane nesikhululo seenqwelomoya, abaphathi bagqiba kwelokuba bathintele ukususwa kunye nokufika komhlaba de imeko ibe phantsi kolawulo.
Kodwa okona kubi kwakuseza kwaye kukuba kungekudala emva kokuba izinto ziqale ukulungelelanisa kwavela enye ingxaki kwaye kule meko kukho into ebaluleke ngakumbi ngokoluvo lwethu. Inqwelomoya eyayisiya eCanada, yasuka kwisikhululo seenqwelomoya yaphula iinxalenye zeempahla zokufika, ngenxa yoko inqwelomoya yarhoxiswa kwangoko kwaye xa isemoyeni, ekuphela kwento enokwenziwa yayikukuhlala kwakhona eMadrid, ke ukufika okungxamisekileyo kuyalungiswa ngoku.
Isishwankathelo, inqwelomoya icinyiwe kwaye inqwelomoya ibhabha ngaphezulu kwenkunzi kwindawo ephantsi, ivutha ipetroli ebiyilungiselele uhambo kwindawo ephantsi, uninzi lwabasebenzisi bayayithumela le nto kwaye iinethiwekhi zentlalo zisetyenziselwa ukubukela iividiyo zenqwelomoya ukubhabha nge ngabantu abangama-130 bebonke ngaphakathi ngubani okulungeleyo ukwenza oku kumisa ngokungxamisekileyo esinethemba lokuba kwaye sinqwenela ukuba kuhambe ngokugqibeleleyo.
Okwangoku, ngelixa sibhala iindaba, ikomiti yeengxaki ihlangana kwisikhululo seenqwelomoya iMadrid-Barajas, ilinde ukufika ngokungxamisekileyo kwendiza yeAir Canada ACA837.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba zonke ezinye iinqwelomoya kunye nomsebenzi kwisikhululo seenqwelomoya kuyaqhubeka ukuba yinto eqhelekileyo ngaphandle kweengxaki ebezikhankanyiwe ngaphambili yidrone kunye nolunye ulibaziseko. Ngokuyintloko into elungiswayo yiyo yonke into eyimfuneko ukunceda, ukunceda nokukhusela oku kuhlala emhlabeni ku I-Boeing 7367, ke amaqela ama-6 abacimi-mlilo abasuka kuluntu athunyelwe e-Barajas, izixhobo ze-SUMMA ezili-10 kunye nentente yongxamiseko ye-Red Cross.
? Isikhululo senqwelomoya iAdolfo Suárez #eMadrid-#Iibhola, waxwayiswa ukuba afumane inqwelomoya i-AK837 esuka @AirCanada Indawo ekuyiwa kuyo eToronto.
Isikhululo senqwelomoya siyasebenza. https://t.co/L0g4RuMUfn
-Aena (@aena) Februwari 3, 2020
La Ixesha elilindelweyo malunga ne-19: 30 ngokuhlwa namhlanje. Umlo wempi u-F-18 ubhabha ecaleni kwenqwelomoya ukuvavanya umonakalo enokwenzeka kwinqwelomoya. Ngecala lakho UJavier Martin ChicoIsithethi sesebe lobuchwephesha kwimanyano yabaqhubi beenqwelomoya ye-SEPLA, sitsho kwithuba elidlulileyo kwi-RTVE:
Gcina ukhumbula ukuba bachitha ixesha elininzi okanye elincinci, kulungile. Yinto abanayo phantsi kolawulo kwaye into abayikhangelayo kukuba nobunzima obufanelekileyo bokufika okuhle eMadrid.
Ukuba ufuna landela umendo wale ndiza ungayenza le webhusayithi. Siyathemba ukuba yonke into iphela kwi-anecdote enye malunga nesikhululo seenqwelomoya. Sishiya isandi apho umqhubi wenqwelomoya azisa abakhweli ngengxaki yokucela uxolo lwengqondo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Isikhululo senqwelomoya saseBarajas eMadrid silungiselela ukufika ngokungxamisekileyo
INetflix kunye neHBO ikhutshwa ngoFebruwari 2020